DHAGEYSO+WARBIXIN: Waa maxay caqabadaha ku hor-gudban heshiiska Itoobiya & Jamhadda ONLF, Maxaase laga filan karaa Kulanka Nairobi? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
DAAWO:Ururka Iskaashatada Qaadka ee Somalia oo weeraray ku qaaday Kenya & Madaxweyne Farmaajo oo gurmad culus helay “Dalkayaga Ayaa Nooga Qaalisan Wax Walba” 43 mins ago
Home 2018 February Wararka Maanta, Warbixino DHAGEYSO+WARBIXIN: Waa maxay caqabadaha ku hor-gudban heshiiska Itoobiya & Jamhadda ONLF, Maxaase laga filan karaa Kulanka Nairobi?
DHAGEYSO+WARBIXIN: Waa maxay caqabadaha ku hor-gudban heshiiska Itoobiya & Jamhadda ONLF, Maxaase laga filan karaa Kulanka Nairobi?
NAIROBI(P-TIMES)- Xubno katirsan dawladda Faderaalka Itoobiya iyo Jamhada Xoreynta gobalka Soomaalida ee dalka Itoobiya loona yaqaano ONLF ayaa wada hadalo ku leh magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kuwaas oo ay uga hadlayaan sidii ay labada dhinac u gaari lahaayeen heshiis wanaagsan, loona soo afjaro dagaalka mudada dheer ka socday gudaha gobalka Soomaalida oo qaatay sannadyo fara badan.
Shirka oo wali ku jira marxalada bilowga ayaa maraya qodobada ugu xasaasisan, gaar ahaana marka laga hadlayo heshiis dhexmara labada dhinac, iyadoo ay qolo kasta xooga saaraynayso arrimaha muhiimka u ah.
ONLF waxay shalay sheegtay in ay xooga saarayso sidii loo heli lahaa wadiiqo ku haboon wada hadal, waxayna sheegtay in wax kasta laga hormarin doono Maxaabiista xabsiyada ku jira iyo danaha ONLF ee ku saleysan gobalka Soomaalida, RIIX HALKAAN
Warbaahinta gudaha dalka Itoobiya waxay baahiyeen in wada hadaladan rajo wanaagsan laga qabo in laga gaaro guul wanaagsan, waxayna ku sifeeyeen go’aamada hadda socda kuwa wanaag u horseedi doona dalka Itoobiya.
Sharuudaha ugu adag waxaa kamid ah, In xabadda ay joojiyaan labada dhinacba, In Maxaabiista ooda laga qaado, In diirada la saaro qaabka ugu wanaagsan ee lays kugu biirin karro ciidamada iyo guud ahaanba nabad guud la wada qaato.
Rashiid Cabdi oo ah madaxa hay’adda la socota xasaradaha ee ICG ee geeska Afrika oo ku sugan magaalada Nairobi oo ay ka socdaan wada xaajoodyadan ayaa falanqeyn kooban ka bixiyey caqabadaha ku wareegsan wada hadalka iyo qorshayaasha ay kala wataan labada dhinac.
Horumar weyn ayay u tahay gobalka Soomaalida ee Itoobiya iyo guud ahaan dawladda Faderaalka ee dalkaas, haddii uu dhaco is fahan wanaagsan oo lagu soo afjarayo dagaalka mudada dheer socday, waxaana uu dalkaas u horseedayaa horumar wanaagsan, dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha iyo Nabadda oo meel wanaagsan tagi doonta.
Cadaadiska ay ciidamada Faderaalka & kuwa Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ku hayaan taageerayasha ONLF ayaa yaraan doona, waxaana horey u jiray heshiisyo la gaaray qaarkood guulo wanaagsan laga gaaray, taas oo dhabaha u xaartay in ay meesha ka baxaan dhacdooyinkii foosha xumaa qaarkood.
Tacadiyo waa weyn ayey Hay’addaha Xaquuqda Aadanuhu ka diwaangaliyeen gobalka Soomaalida ee dalka Itoobiya, taas oo ay geysteen ciidamada Ismaamulka iyo kuwa Faderaalka oo la rumeysan yahay in ay dadweynaha cadaadis ku saarayaan howlaha ay wado ONLF.
ONLF waxay laftirkeedu leedahay masuuliyadda dhibaatooyinkan, waxaana marar badan lagu eedeeyey in ay dab qabadsiisay gaadiid iyo deegaano ay lahaayeen shacabku, iyagoo sabab uga dhigaya in ay taageeraan dawladda Itoobiya.
Maxaabiis badan oo ka tirsan ONLF lagana soo qabtay gudaha Soomaaliya iyo kuwa Ismaamulka Soomaalida ayaa lagu hayaa xabsiyada aadka loo ilaaliyo ee kuyaala Jigjiga iyo Addis Ababa, waxaana lafilayaa in haddii heshiis la dhaco ooda laga qaado Maxaabiistaas taas oo ah talaabo wanaagsan.
One thought on “DHAGEYSO+WARBIXIN: Waa maxay caqabadaha ku hor-gudban heshiiska Itoobiya & Jamhadda ONLF, Maxaase laga filan karaa Kulanka Nairobi?”
khadar February 18, 2018 at 7:23 pm · Edit
Ani ahaan waxaan u arkaa ama aan aamin sanahay hadii ETHIOPIA iyo ONLF ay heshiis sax ah oo qodobaysan ay gaaraan inay tahay horumarka igu horeeya ay labada dhinacba ku talaabsadeen.
Waxaana filayaa inay xal kagaari doonaan arintan
xogtana idinla socdaa